အသင်းကြီးတွေ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ပွဲရလဒ်တွေနဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
အသင်းကြီးတွေ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ပွဲရလဒ်တွေနဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၁၅ ) မှာတော့ ဦးဆောင် သူ လီဗာပူး အပါ အဝင် အသင်းကြီးတွေ အားလုံး အနိုင် ရခဲ့ ကြ ပါတယ် ။ လီဗာပူး ဟာ အဲဗာတန် နဲ့ မာဆေးဆိုက် ဒါဘီ ပွဲ ကို အန်ဖီးလ် မှာ ကစား ခဲ့ပြီး အပြန် အလှန် ဂိုးတွေ သွင်းကာ ၅ – ၂ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။ ဆာလာ ၊ အဲလစ်ဆွန် ၊ ဖာမီနို တို့ မပါပေမယ့် လီဗာပူး ဟာ ချန်ပီယံ ခြေစွမ်း ကို ပြသသွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
အိုးထရက်ဖိုဒ့် မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး တို့ရဲ့ ပွဲမှာတော့ ယူနိုက်တက် ဟာ တိုက်စစ်မှုး မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ရဲ့ သွင်းဂိုး တွေ နဲ့ စပါး ကို အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။ စပါး နည်းပြသစ် မော်ရင်ဟို ကတော့ အသင်း ဟောင်း နဲ့ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ တဲ့ ပွဲမှာ နိုင်ပွဲဆက်မှု ရပ်တန့် သွားခဲ့ ရ ပါတယ် ။
စတမ်းဖိုဒ့် ဘရစ် မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ အက်စ်တွန် ဗီလာ တို့ရဲ့ ပွဲစဉ် မှာလည်း အိမ်ရှင် ချဲလ်ဆီး ဟာ တမ်မီ အေဘရာဟမ် ၊ မေဆွန် မောင့် တို့ရဲ့ ဂိုးတွေ နဲ့ ဗီလာ ကို အနိုင် ကစားပြီး အဆင့် ၄ နေရာ ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ထားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
အဆင့် ၂ နေရာက လက်စတာ စီးတီး ကလည်း အိမ်ကွင်းမှာ အနိုင် ရခဲ့ပြီး ဂျေမီဗာဒီ တို့ ဂိုးသွင်း နေဆဲ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ယနေ့ ည မှာတော့ လက်ကျန် ပွဲစဉ် ၂ ပွဲ ကို ဆက်လက် ကစား ကြမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲရလဒ်များ –
လီဗာပူး ၅ – ၂ အဲဗာတန်
ချဲလ်ဆီး ၂ – ၁ ဗီလာ
လက်စတာ ၂ – ၀ ၀က်ဖိုဒ့်
ဆောက်သမ်တန် ၂ – ၁ နောဝှစ်ချ်
၀ုဗ် ၂ – ၀ ၀က််စ်ဟမ်း
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၂ – ၁ စပါး
နာပိုလီ နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီ ဟာ လာမယ့် ရာသီ မှာ အသင်း ဟောင်း PSG ကို ပြန်သွား ဖြစ် နိုင်တယ် လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဘိုင်ယန် မြုးနစ် ဟာ PSG နည်းပြ သောမတ်တူချယ် ကို စိတ်ဝင်စား နေပြီး PSG ကလည်း တူချယ် ကို လက်လွှတ်ကာ အန်ဆယ်လော့တီ ကို ပြန်ခေါ်ဖွယ် ရှိတယ် လို့ သတင်း တွေ ထွက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်း ဟာ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲ တုန်းက ကွင်းအတွင်း ၀င်ရောက် လာတဲ့ ထီးတစ်လက် ( ပရိသတ် ပစ်ပေါက် လိုက်သည့် ) ကြောင့် ယူရို ၆၀၀ ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင် ရမယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် “Girezmann Die” ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အော်ဟစ်မှု အတွက်တော့ အရေးယူခြင်း မခံ ခဲ့ရဘူး လို့ သိရ ပါတယ်။
ယူဗင်တပ် ကွင်းလယ်လူ ခီဒီယာ ဟာ ဒဏ်ရာ ကို ခွဲစိတ်ကုသ ခဲ့မှု အောင်မြင် ခဲ့တာ ကြောင့် ၃ လ ခန့် သာ အနားယူ ရတော့ မယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း မှာ ကစား သမား အပြောင်း အရွှေ့က နေ အေးဂျင့်တွေ ရရှိ ခဲ့တဲ့ အကျိုးဆောင်ခ စုစုပေါင်း ဟာ ပေါင် သန်း ၅၀၀ ကျော်လွန် ခဲ့တယ် လို့ ဖီဖာ ရဲ့ နှစ်ကုန် စစ်တမ်း က ဖော်ပြသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှုး အန်တိုနီ မာရှယ် ဟာ စပါး နဲ့ ပွဲ ကို လွဲချော် ခဲ့သလို ပိတ်ရက် မှာ ကစားမယ့် မန်ချက် စတာ ဒါဘီ အတွက် လည်း မသေချာ သေးဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။ ပေါ့ဘာ က တော့ ခရစ္စမတ် နားလောက် မှ ပြန်ကစား နိုင်ဖို့ ရှိနေပြီး ဇန်နဝါရီ မှာ ရီးရဲ ကို ရောက်ဖို့ လည်း အလွန် အလေးသာ နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
စပါး အသင်း ကတော့ အဲရစ်ဆင် ကို စာချုပ် ပြည့်မှ အလွတ် နဲ့ ဆုံးရှုံး ရဖို့ ထက် ဇန်နဝါရီ မှာ တင် ပေါင် သန်း ၄၀ ခန့် နဲ့ ရောင်းထုတ် ပစ်ဖို့ ကို ပိုမို စိတ်ဝင်စား နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါ့ အပြင် စပါး ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ နောဝှစ်ချ် နောက်ခံလူ ဘန် ဂေါ့ဖရီ ကို ပေါင် ၂၅ သန်း ၀န်းကျင် နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ လူငယ် ကစား သမားလေး တိုဒီဘို ကို အတွေ့ အကြုံ ရရှိ ဖို့ အတွက် ဇန်နဝါရိ မှာ အငှား စေလွှတ်မယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ ဟာ အင်တာ မှာ ဂိုးတွေ သွင်းနေတဲ့ အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှုး လူတာရို မာတီနက် ကို စီးတီး ကနေ ထွက်ခွာ တော့မယ့် တိုက်စစ်မှုးကြီး အဂွေရို ရဲ့ နေရာ ကို အစားထိုး ဖို့ အတွက် စိတ်ဝင်စား နေတယ် လို့ သိရပါတယ် ။
UEFA ဥက္ကဌ ကတော့ ရုပ်သံ နည်းပညာ အကူ အညီ ဖြစ်တဲ့ ( VAR ) ရဲ့ ပရိသတ် မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆို ခဲ့ပြီး VAR ဟာ အရှုပ်ထုတ် တစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ကတော့ လူငယ် တိုက်စစ်မှုးလေး အန်ဆု ဖာတီ ကို ၂၀၂၂ အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆို လိုက်ပြီး စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေး ဟာ ယူရို သန်း 170 အထိ ရှိခဲ့ တယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ ဖာတီ အနေနဲ့ စီနီယာ အသင်းကြီး အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ် ချုပ်ဆို ပြီးပါက စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေး ဟာ ယူရို သန်း ၄၀၀ အထိ ခုန်တက်သွား မယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။